Madagasikara : Fikomiana Tao Antananarivo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2018 16:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Português, English
May ny Radiom-pirenena malagasy – Sary Caro Termoz tao amin'ny Facebook
Ny fandrobàna ny alin'ny 26 hifoha 27 janoary – Sary @harinjaka
Nisy sary avy amin'i @thierry_ratsiz, alatsinainy 26 janoary naneho ny fandòrana tao amin'ny foibem-barotra Magro Ankorondrano,
Jereo ihany koa : Lahatsarin'ny fandrobàna tamin'ny 26 janoary.
Fanavaozam-baovao ( talata 27 janoary, 6ora sy 40mn hariva frantsay )
Azo nohenoina mivantana tao amin'ny haban-tranonkala ( onjapeo amin'ny tranonkala) tamin'ity adiresy ity : http://beza.info/mada/faniloradio.m3u ny onjapeo malagasy Radio Antsiva
(Misaotra ny onjapeo malagasy Fanilo Radio). Tsara ho marihana fa noho ny zava-mitranga eto an-toerana dia mety hikorontana ny fandefasana amin'ny web-radio.
Fanavaozam-baovao (talata 27 janoary, amin'ny 1 ora sy sasany tolakandro, ora frantsay)
Avy any Madagasikara, hamafisin'i Thierry Ratsiz ao amin'ny kaonty Twitter-ny fa notanisain'ny radio Antsiva tamin'ny vaovao tselika maraina ireo niharam-boina nandritra ny fifanosehana tao amin'ny foibem-barotra Magro Ankorondrano. Mihanaka manerana ny firenena ireo korontana, hoy hatrany ity mpitoraka bilaogy ity. Nozarain'i Andry ihany koa (amin'ny teny frantsay), mpampianatra sady mpanao gazety any Antsirabe, ny famakafakàny ilay toe-draharaha.
Malagasy maro mifanerasera amin'ny hafatra fohy soratana amin'ny sehatry ny bilaogy madinika Twitter ( amin'ny alàlan'ny somaiso na amin'ny solosaina) no mitantara ny fahamaizan'ny radiom-pirenena Malagasy sy fara-fahakeliny foibem-barotra iray, ny toerana nisy fandrobàna, ary ny toe-javatra misavoritaka, na teo aza ny antso nataon'ny Praiministra ho amin'ny fitoniana. Namoaka ny tantaran'ity fikomiana androany ity sy sary maro tao amin'ny bilaoginy (amin'ny teny anglisy) i Andrydrago. Azo vakiana, amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny kaonty Twitter-n'i Tandriamirado, Harinjaka, sy ny hafa, ireo hafatra farany avy any Madagasikara. Faka nojerena tao amin'ny Twitter tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #madagascar ireo hafatra rehetra manerantany mikasika an'i Madagasikara, nalefa tao amin'ity sehatra ity.
Fanavaozam-baovao ( 8ora sy 09mn alina any amin'ny tanibe Frantsa) : Na milaza foana aza ny tsaho fa nandao an'i Madagasikara ny Filoha Ravalomanana, dia ny mifanohitra amin'izany no ambaran'ny sasany. Bitsika iray navoakan'i Daniel Austin [tamin'ny 4 ora sy 29 mn hariva GMT] no milaza fa “ny vaovao rehetra avy amin'ny loharanom-baovao azo antoka dia milaza fa diso ny tsaho milaza fa nandao an'i Madagasikara i Ravalomanana”. Ambaran'ny bitsika navoakan'i Thierry Ratsizehena [5ora sy 38 mn hariva] fa hapetraka ao amin'ny firenena ny fitondràna miaramila. Nitsahatra tsy nandefa fandaharana ny onjampeo sy fahitalavitra ary nifamahofaho be ihany ny vaovao. Mandefa tsy tapaka isanandro ny vaovao araka ny fahatongavany ny Global Voices.
Taorian'ilay hetsika goavana, ny 25 janoary 2009, dia nanaitra ny fivoaran'ny toe-draharaha tany Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara, tato anatin'ny 24 ora.
Fanamarihana: Tamin'ny ora namoahana ny dikantenin'ity lahatsoratra ity ( 4 ora sy 23mn, ora any amin'ny tanibe Frantsa), dia toa hoe, na nandao an'i Madagasikara Ravalomanana sy ny fianakaviany, na niala ny renivohitra. Tsy mbola voamarin'ny masoivohom-baovao ilay vaovao amin'izao ora izao fa avy amin'ny loharanom-baovaon'ny mpanoratra (Lova Rakotomala) any an-toerana ity lahatsoratra ity. Fanamarihana : Nitsahatra tsy nandefa fandaharana ny onjampeo rehetra.
Vaovao maro no nanamafy fa fahitalavitra sy onjampeo maro no nampiato ny fandefasana ny fandaharany. Trano maro, isan'izany ny trano fandriam-bahiny kintana dimy iray sy tranom-barotra vitsivitsy no nodorana na notoraham-bato. Anankiroa no nolazaina fa maty (vaovao hamarinina amin'ny loharanom-baovao tsy miankina) ary ny sasany amin'ireo hafatra farany avy any Madagasikara dia milaza fa may tanteraka ny faritra maro ao Antananarivo. .
Mamahana tsy tapaka amin'ny alàlan'ny bitsika (hafatra fohy ) ireo izay manaraka ny vaovao momba ny korontana misy any amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny bitsika ao Madagasikara. Marina fa tsy mbola voatrandraka ho toy ny fitaovana mahomby hifaneraseràn'ny sarambabem-bahoaka any Madagasikara ny aterineto, izany angamba no manazava fa tsy mbola ampiasaina izy. Indreto misy hafatra vitsivitsy, nosoratana tamin'ny teny frantsay, na nadika avy tamin'ny teny anglisy, izay hahafahana maneho tsotsotra ny fifanesen'ireo tsaho sy ny zava-mitranga :
- Hafatra voalohany avy amin'i thierry_ratsiz tamin'ny 4 ora sy 33mn hariva (ora any an-toerana) milaza ny mety higiazana ny fandefasampeon'ny radio VIVA mandritra ny alina.
- tamin'ny 5 ora sy 19mn hariva notaterin'i R1lita fa nosakanan'ny hetsi-panoherana ny fiara fitaterany, ary avy eo nanontany tena izy raha toa ka nokaramaina mba ho tonga ireo mpanao fihetsiketsehana ireo.
- tamin'ny 8 ora sy 11mn alina , taterin'i Barijaona ny fandrobàna ( tora-bato)
- tamin'ny 8 ora sy 25mn alina manoratra i tandriamirado fa miantso ny vahoaka hisakana ny miaramila tsy haka ny foibeny ny radio VIVA.
- amin'ny 12ora sy 34mn alina miverina indray ao amin'ny hafatr'i thierry_ratsiz, sy ireo bitsika maro hafa ilay tsaho izay milaza fa ahiana hisy mpikarama an'ady hiditra ao amin'ny tranon'ny radio VIVA, izay ahiana tsy handefa fandaharana.
- amin'ny 5 ora sy fahefany maraina : namafisina fa ‘tsy mandeha intsony ny radiom-pirenena (RNM) sy ny fahitalavi-pirenena (TVM) .
- amin'ny 5 ora sy 24mn maraina nambara ny fisian'ny fandrobàna ny magazay Magro sy ny fahatongavan'ny tafika.
- amin'ny 7 ora sy 47 mn maraina, may ny trano fonenan'ny mpanao politika ambony iray
– amin'ny 10 ora sy 54mn antoandro lazaina fa roa no maty ary may ny foiben'ny MBS, radion'ny mpomba ny fitondrana
- amin'ny 11 ora sy 57 mn antonadro nambaran'i re_hita fa nifidy ny hiala tao amin'ny radio ireo miaramila nampiandraiketina ny fiarovana ny tranon'ny RNM.
– amin'ny 2 ora sy 02mn tolakandro tanisain'i papajoe786 ireo tranom-barotra hafa may any atsimon'i Madagasikara, any Atsirabe sy Fianaranatsoa.
- amin'ny 2 ora sy 25mn nolazain'ilay bitsika MadagascarTweet fa may ny faritra Ambohimitsimbina, havoana itoeran'ny fampielezampeo sy sary.
- amin'ny 2 ora sy 28mn vonona hiainga ny fiaramanidin'ny filoha hoy i fidy.
Ho fampahafantarana bebe kokoa momba ny zava-misy miteraka ireo korontana ireo, dia azonao vakiana ireo bilaogy navoakanay teo aloha.